फ्रिजमा सामान राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा – Bihani Online
फ्रिजमा सामान राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
१३ फाल्गुन २०७३ ०२:२० February 24, 2017 bihani
काठमाण्डौं,फागुन १३- नबिग्रियोस् र स्वस्थ रहोस् भन्नका लागि फ्रिजमा सामान राख्ने गरिन्छ । तर, फ्रिजमा राख्दैमा सबै सामान बिग्रिँदैन र स्वस्थ रहन्छ भन्ने होइन । कतिपय कुरामा ध्यान दिन सकिएन भने फ्रिजमा सामान राख्दा झनै बिग्रिन सक्छ ।
खाद्य प्राविधिक मदन चापागाईंले फ्रिजमा सामान राख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे जानकारी दिएका छन् :
१. धेरै बिग्रिने, कम बिग्रिने र नबिग्रिने गरी खानेकुरा तीन किसिमका हुन्छन् । सुख्खा अन्न, गेडागुडी नबिग्रिनेमा पर्छन् । मासु, दूध, साग, माछाजस्ता कुरा धेरै बिग्रिनेमा पर्छन् । यसैगरी सागपातबाहेक तरकारी र फलफूल कम बिग्रिनेमा पर्छन् । यो कुरामा प्रस्ट भइसकेपछि मात्रै सही ढंगले फ्रिजको उपयोग गर्नुपर्छ ।
२. सुक्खा अन्न र गेडागुडीलाई फ्रिजमा राखिरहनुपर्दैन । यी चिजलाई फ्रिजबाहिरै सुक्खा र ओभानो ठाउँमा राख्नुपर्छ । यस्ता सामान फ्रिजमा राख्नु भनेको फ्रिजको खर्च बढाउने, ठाउँ ओगट्ने त छँदै छ, क्रस कन्ट्यामिनेसनसमेत हुन्छ । फ्रिजमा पानी हुने भएकाले सुक्खा चिज राख्दा ढुसी पर्ने र बिग्रिने हुन्छ । यस्ता क्रस कन्ट्यामिनेसन भएका चिज उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउँछ ।
३. मासु, माछाजस्ता चाँडै बिग्रिने चिज भने फ्रिजमा राख्नुपर्छ । मासुजस्ता चाँडै बिग्रिने चिज फ्रिजमा राख्नुपर्छ । यी चिजलाई धेरै दिनसम्म नै राख्नुपर्ने हो भने सामान्य फ्रिजमा मात्रै राखेरसमेत पुग्दैन, डिपफ्रिजमै राख्नुपर्छ । डिपफ्रिजमा माइनस तापक्रम हुन्छ । माइनस १० देखि पनि तल हुन्छ । यसमा राखेको चिज आइस बन्छ । तर, यसलाई पछि प्रयोग गर्दा मनतातो आरीलगायतमा राखेर आइस पगालेर फालेपछि सामान्य अवस्थामा ल्याएर मात्रै पकाउनुपर्छ । आइसमै पकायो भने मासुको स्वाद नै बिग्रिन सक्छ ।
४. अन्डा पनि फ्रिजमा राख्नुहुँदैन । बाहिर खोस्टा हुने अन्डाभित्र तरल पदार्थ हुन्छ । फ्रिजमा राख्दा भित्रको तरल पदार्थ आइस बन्छ, भोल्योम बढ्छ र अन्डामा दबाब परेर खोस्टा चर्किन्छ । चर्किएको खोस्टाबाट कीटाणु छिरेर अन्डालाई खान अयोग्य बनाउन सक्छ । त्यसैगरी दूधलाई भने सामान्य फ्रिजमा राखे पनि डिपफ्रिजमा राख्नुहुँदैन । चारदेखि १० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्न सकिन्छ ।
५. केरा, कटहर, आँप, मेवा, फर्सी, गोलभेडा, अदुवा, सख्खरखण्डलगायत फलफूल तथा तरकारी फ्रिजमा राख्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । यस्ता चिजलाई १३ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्यो भने लामो समयसम्म स्वस्थ राख्न सकिन्छ । चारदेखि १० डिग्री सेल्सियसको सामान्य तापक्रममा राख्दा यी चिज चाँडै बिग्रिन्छ । तापक्रम मिलाउन जानिन्न भने त यस्ता चिज बरु फ्रिजबाहिरै राखेको राम्रो हुन्छ । पाक्न बाँकी फलफूल पनि फ्रिजमा राख्नुहुँदैन । फ्रिजमा राखेपछि यस्ता फलफूल पाक्दैनन् ।
६. आलु, प्याज, लसुनलगायत खाद्यान्न भने फ्रिजमा राख्नु गल्ती हुन्छ । चिसो फ्रिजमा राख्दा आलु गुलियो हुन्छ र बिग्रिन्छ । प्याज फ्रिजमा राख्दा ढुसी पर्छ भने लसुन उम्रिन्छ ।
७‍. कफी खोलिसकेपछि फ्रिजमा राख्दा स्वाद नै गुम्छ । डल्ला पर्ने समस्या पनि हुन्छ । त्यसैगरी महलाई फ्रिजमा राख्नुपर्ने जरुरी पर्दैन । मह फ्रिजबाहिरै राख्दा राम्रो हुन्छ । बाहिरको सामान्य तापक्रममा राख्दा पनि नबिग्रिने गुण महमा हुन्छ ।
नोबेलमा न्यूरो सर्जनको अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन : नौ देशका बरिष्ठ न्यूरो सर्जनको जमघट
डा.सुनिल शर्माले गरे बेवारिसे बिरामी बृद्धको उद्धार
कोरोनाभाईरस संक्रमण- चीनको हुबे प्रान्तमा एकै दिन २४२ को मृत्यु
सुत्ने ओछ्यानको तन्ना कत्तिको फेर्नु हुन्छ ?
डा.सुनिल शर्माद्वारा बिपन्न बिद्यार्थीलाई एक लाखको शैक्षिक सामाग्री र पोशाक प्रदान
महाशिवरात्री पर्व धुमधाम मनाईंदै, देशभरका शिव मन्दिरमा भीड
लौ जान्नुहोस् मरिचका फाईदैफाईदा
१कोरोनाबाट जापानमा एकै दिन ७ जनाको ज्यान गयो ,मृतकको संख्या ७७ पुग्यो
२कोरोनाले लियो जापानमा ७० जनाको ज्यान, संक्रमितको संख्या २६७४ पुग्यो
३जापानमा कोरोनाले लियो ६६ जनाको ज्यान, संक्रमितको संख्या २६०३ पुग्यो
४अहिले नै आपतकालिन अवस्था घोषणा गर्नु आवश्यक छैन : प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे
५कोरोनाबाट जापानमा ६५ जनाको मृत्यु,२४ सय ३४ जना संक्रमित
५जापानमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६४ पुग्यो, ९९ जना नयाँ संक्रमित थपिए
कोरोनाबाट जापानमा एकै दिन ७ जनाको ज्यान गयो ,मृतकको संख्या ७७ पुग्यो
१९ चैत्र २०७६ ११:४४ April 1, 2020 bihani
कोरोनाले लियो जापानमा ७० जनाको ज्यान, संक्रमितको संख्या २६७४ पुग्यो
१८ चैत्र २०७६ १३:०९ March 31, 2020 bihani